मध्यराति कांग्रेस र एमालेबीच के भयो सहमति ? — Sanchar Kendra
मध्यराति कांग्रेस र एमालेबीच के भयो सहमति ?
काठमाडौं । सत्तारुढ नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेका शीर्ष नेताहरुबीचको छलफल सकिएको छ ।
बिहीबार साँझ प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा बसेको बैठकमा संसदमा एमालेले जारी राखेको अवरोध खुलाउने र अमेरिकी सहयोग परियेजना एमसीसी पारित गर्ने विषयमा छलफल भएको कांग्रेस नेता तथा सञ्चारमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले बताए ।
छलफलमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले एमसीसी अनुमोदन गर्न एमालेको साथ मागेका थिए । तर एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले आफूहरुले जे मुद्दा उठाएर संसद अवरोध गरेको छ, त्यो विषय संबोधन नभएकाले संसदीय प्रक्रियामा सहभागी हुन नसक्ने बताएका मन्त्री कार्कीले बताए ।
यद्यपि संसदलाई प्रभावकारी बनाउने विषयमा निरन्तर छलफल गर्ने सहमति भएको उनले बताए । बैठकमा सहभागी स्रोतका अनुसार एमाले र कांग्रेसबीचको छलफल सकारात्मक छ ।
काँग्रेस एमाले एउटै लाइनमा : नेम्वाङ
नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष सुवास नेम्वाङले नेपाली काँग्रेससँगको छलफल सकारात्मक रुपमा अघि बढेको बताएका छन् ।
दुई पार्टी बीचको छलफलपछि नेम्वाङले एमसीसी पारित गर्ने र संसद् अवरोध खुलाउने विषयमा दुई पार्टी बीचको छलफल सकारात्मक ढङ्गले अघि बढेको बताए ।
‘आज साँझ पनि दिउँसो छलफल भएकै विषय आसपास कुराकानी भयो । संसद्को अवरोध खुलाउने र एमसीसी पारित गर्ने विषयमा काँग्रेस र एमालेको एउटै लाइन देखिएको छ उनले भने ।
यद्यपि, आजको बैठकमा ठोस सहमति नभएकाले भोलि बिहान संसद् बैठक अघि बसेर फेरि छलफल गरिने उनले जानकारी दिए ।
बैठकमा नेपाली काँग्रेसको तर्फबाट पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवा, उपसभापति पूर्णबहादुर खड्का, महामन्त्री गगन थापा सहभागी थिए भने नेकपा एमालेको तर्फबाट पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसहित वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेल, उपाध्यक्ष विष्णु पौडेल र सुवास नेम्वाङ रहेका थिए ।
एमसीसी पारित गर्ने विषयमा सत्तारुढ गठबन्धनमा रहेका दलहरू बीच एक मत हुन नसकेपछि प्रधानमन्त्रीले प्रमुख प्रतिपक्षी दलको साथ खोजेका हुन् ।